सजिएर गए, शपथ लिन पाएनन् – Sajha Bisaunee
सजिएर गए, शपथ लिन पाएनन्
। ५ फाल्गुन २०७४, शनिबार १९:०२ मा प्रकाशित
रुकुमबाट निर्वाचित सांसद बिमला केसी शुक्रवार प्रदेश सभाको भवनमा साथीहरूसँग व्यस्त थिइन् । सोही क्रममा एकास्सी उनको मोवाइलमा घण्टी बज्यो । फोनमा सन्देश आयो, ‘तपाईं कुन हालतमा हुनुुहन्छ ? कस्तो कपडा लगाउनु भएको छ ? तत्काल नयाँ पोशाक लगाएर
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आउनुहोला ।’
यो सन्देशपछि सांसद केसी केहीबेर अलमलमा परिन् । माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीको शपथका लागि तयार हुन भनेपछि उनी हतारमा नयाँ पोशाकमा सजिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगिन् । तर उनले शुक्रवार मन्त्रीको शपथ लिन
पाइनन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको गेटभित्र पस्दा उनको अनुहारमा खुशी चम्किएको थियो । तर मन्त्रीको शपथ लिन नपाएपछि उनी त्यही गेटबाट निराश भएर फिर्ता भइन् ।
जुम्लाबाट निर्वाचित माओवादी सांसद नरेश भण्डारीले पनि कोट र पाइन्टमा सजिएर मन्त्रीको शपथ लिन पुगेका थिए । तर उनले पनि मन्त्रीको शपथ लिन पाएनन् । माओवादीले आफ्नो भागमा परेका दुई जना मन्त्रीको शपथ खुवाउने तयारी गरेको थियो । तर गठबन्धनको दल एमालेले अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीहरूको शपथ गराउन नमानेपछि माओवादीका मन्त्रीहरूको पनि शुक्रवार शपथ हुनसकेन ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्यमन्त्रीसहित सातै जना मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले सबैलाई शपथ खुवाउने तयारी गरेका थियौं, माओवादीका दुई मन्त्रीको लागि त शपथ पत्र प्रिन्ट नै भएको थियो । तर अन्तिममा आएर मन्त्रीहरूको शपथ रोकियो ।’
स्रोतका अनुसार माओवादीले मन्त्रीको शपथ गराउने तयारी गरेको भए पनि एमालेले मन्त्री छान्न नसकेपछि शपथको कार्यक्रम अन्तिममा आएर रोकिएको हो । प्रदेश ६ मा जम्मा सातवटा मन्त्रालय रहनेछन् । जस अन्तर्गत एमालेले चार र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित तीन वटा मन्त्रालय सम्हाल्ने सहमति भएको छ ।